Mgbaghara m na-arịọ ndị enyi m na ndị ọrụ ibe m na Chicago | Martech Zone
Na-akpọ gị isonye na Marketing Prof. B2B ahia ogbako bụ nrọ rọrọ! Ihe ngosi m dị mma ma dozie ụlọ m na Renaissance. Enwere m ụfọdụ Kaadị azụmahịa emere kpọmkwem maka ihe omume ahụ! Enweghị m ike ichere izute netwọkụ mebere m toro n'afọ gara aga.
Ekwesịrị m ịrụ ọrụ Mọnde ma atụmatụ m bụ ịkwọ ụgbọala mgbede Mọnde ma zuru ike maka nnọkọ taa, Na-eweta B2B ịde blọgụ na ọkwa ọhụrụ.
Nke ahụ bụ atụmatụ ahụ.
N'ụtụtụ Mọnde, achọpụtara m na ike gwụrụ m mgbe m na-akwọ ụgbọala m banye n'ọrụ. E nwere ndị di na nwunye oge ebe m chere na m n'ezie ụra na-acha uhie uhie ọkụ… adịghị mma. Daybọchị na-arụpụta ihe, mana enwere m nkwụsịtụ ụbọchị niile na ụfọdụ ihe mgbu. Site na ụgbọala m na-aga n'ụlọ, achagharịrị m na achagharị. M rutere n'ụlọ na ihe a n'abalị! M ka na-ele anya na ikekwe ọ bụ naanị ihe m riri wee kpebie ịhapụ ụlọ nkwari akụ ahụ na ịkwọ ụgbọala mgbe etiti abalị gasịrị. Na 3AM, agbanyeghị, m ga-ede ndị enyi m na mmemme ahụ wee mee ka ha mata na ọ nweghị ụzọ m ga-esi mee ya.
Enweghị m ike inwe nkụda mmụọ karịa! Nke a bụ nke mbụ m ‘enweghị show’ na m bummed si. Ndo ndi otu ahu - karia ndi ahia Prof. Shelley deere m ya n'ụzọ kasị mma. Josh Hallett, Ann Handley, Deborah Franke, Phil Gomes, Christina Kerley, Alison Ahịa. O wutere m na anaghị m ewepụta oge oge mụ na ndị enyi m na-akparịta ụka, Paul Dunay na Kristian Andersen dị ka nke ọma.
Mgbe ihe dị ka awa iri na anọ nke ụra hiri nne, m na-ala azụ. Echere m na m ga-abanye igwe kwụ otu ebe ebe a na nkeji ole na ole ma gbaa otu awa. Achọrọ m ịdị njikere maka echi - nzukọ ọgbakọ ọzọ, WebCamp. Agaghị m atụ uche 2 n'usoro!
Ngosi: Ihe Mere Azụmaahịa Gị Ga-eji Bọlọgụ
Ọkt 2, 2007 na 3:24 PM
Ọ dị m nwute ịnụ na ahụ adịchaghị gị mma! Obi m dara mgbe m kwụsịrị ma hụ obere ihu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, enwere m ụjọ na ị gaghị anọ na Web Camp echi. Akpọrọ m gị asị na ị gbaghara ogbako a ị na-atụ anya… .Ma enwere m obi ụtọ na ị na-enwe mmetụta dị mma NA ị ga-abịa WC echi. Oge gị na-eto eto mgbe niile. Ga-ahụ gị echi!
Ọkt 3, 2007 na 2:18 PM
Ndoo na ị gaghị emeli ya! Ọ bụ ikpo nke otu panel. Ọtụtụ akụkọ ọma, ndụmọdụ na ọchị. Nke a bụ oge nke abụọ m na kọmitii na-arụ ọrụ na Josh na ọ dị mma.
Ọkt 3, 2007 na 2:58 PM
Anyị agbaghara gị, Doug. Ọ ga-adị mma ma ọ zute gị ma nụ ihe ị na-eme.
Nwee olile anya ijide na ogbako ozo n’oge n’adighi anya, ma nwee obi uto imata na ino!